Hoos Udhaca Kaamirada-Xididaha leh ee ay Wadaagaan Saraakiisha Booliska | Xalka OMG
Adeegsiga kaamerooyinka jirka ee fulinta sharciga ayaa ah mowduuc muran badan dhaliyay. In kasta oo tikniyoolajiyadda noocan ahi ay gacan ka geysan karto ilaalinta saraakiisha bilayska iyaga oo joojinaya dhaqan ahaanta aan habooneyn iyo bixinta muwaadiniinta si aan xaq ahayn loogu eedeeyay dambiyada caddeyn, arrinta daah furnaanta sawirradan wali waa laga dooday.
Diidmada ayaa ah in kaamirooyinka jirka aysan daruuri aheyn inay xalliyaan khilaafaadka booliisku ay leeyihiin ee ku saabsan fulinta sharciga, maxaa yeelay doorashada xagallada toogashada fiidiyowgu maahan inay matalaan xaqiiqada oo dhan, sawirradu qasab ma ahan inay run yihiin, laakiin sidoo kale ku lug leh dhibaatada ilaalinta asturnaanta. Boliiska, marka lagu daro dhibaatada miisaaniyada, kamaradu waxay si weyn u kordhin doontaa shaqada maamulka ee saldhiga booliiska, maxaa yeelay waa howlo badan oo xog aruurin ah si loo xajiyo, loo keydiyo loona falanqeeyo fiidiyowga uu qabtay kaamirada.
Tusaale ahaan, siyaasad cusub oo la soo bandhigay waxay u baahan doontaa saraakiisha booliiska inay soo bandhigaan sawirada gudahooda 45 maalmood gudahooda, kaasoo dhaqaajin doona qodobbada hadda jira ee ah in sawirrada laga saari doono haddii aysan muhiim u ahayn maxkamadaynta.
Flaws si loo helo oo loo saxo sawirrada
Daraasadaha ayaa sheegaya in kaamirooyinka jirka ay saameyn yar ku leeyihiin xadgudubka booliiska, laakiin muuqaalka filimku wuxuu faa iido u yeelan karaa xukunnada dambiyada, taasoo horseedaysa dhaqso u ansaxinta tikniyoolajiyadan.
Si kastaba ha noqotee, tikniyoolajiyadani khatar ma ahan waxayna hadda u muuqataa in caddaynta suurtagalka ah in wax laga baddali karo ama laga saari karo iyadoo ay ugu wacan tahay nuglaanshaha badan ee softiweerka lagu dhisay kamaradaha.
Xaaladaha oo dhan, nuglaanta amniga ayaa u oggolaatay baadiyuhu inuu waxyeelo u geysto, oo ay ku jiraan tirtirka sawirrada, wax ka beddelka nuxurka, beddelaadda qaabdhismeedka faylka, iyo si deg-deg ah u soo dejinta sawirro cusub. bedelay.
Arimaha nabadgelyada ee laxiriira aaladahaan xitaa si qoto dheer ayey udhaceen Mitchell ayaa sidoo kale daahfurtay arrimaha amniga ee la xiriira barnaamijyada mobilada, barnaamijyada kumbuyuutarrada iyo adeegyada daruuraha ee ay kaamirooyinka ku xiran yihiin, iyo sidoo kale adeegsiga baahsan ee shahaadooyinka fudud ee la qiyaaso.
Looma baahna qoraal ama saxeexin fiidiyowyo
Saldhigyada midkoodna la tijaabiyey ma isticmaalaan ilaalin qarsoodi ah faylal muuqaal ah looma qorin si dijital ah. Haddii hay'adaha booliisku doonayaan inay adeegsadaan tikniyoolajiyadan si ay u ururiyaan caddeyn, maqnaanshaha saxiix waa dhibaato daran.
Saxeex la'aan, nuxurka fiidiyowga looma xaqiijin karo si sax ah ama lama soo saari karo timestamps - taas oo caqabad ku noqon karta caddeynta. Kuwa weerarka geystaa, sidaas darteed, waxay wax ka beddeli karaan sawirrada iyada oo aaney suurta-gal ahayn in lagu ogaado khalkhalgelinta noocan ah.
Booliiska sidoo kale khatar ayey ku noqon karaan sababtoo ah arrimo kale oo amniga la xiriira awgood. Marka laga reebo nooca CeeSc, dhammaan kaamirooyinka la tijaabiyay waxay leeyihiin awoodo raadiyo Wi-Fi awoodna uma leh inay si sax ah u daboolaan cinwaannada IP ee la xiriira aaladda.
Tani waxay ka dhigan tahay in qofka wax weerarayaa uu heli karo side, isaga oo dhibaato weyn oo xagga amniga ah u leh booliiska, gaar ahaan markay jiraan hawlgal qarsoon. Cinwaanada IP sidoo kale waa la raadraaci karaa si loo ogaado dardar galinta waxqabadka kamarada, taas oo soo jeedin karta weerarada qorsheysan.
Waxaa xitaa suuragal ah in barnaamijyo xunxun lagu rakibo kaamirooyinka jirka, taas oo u oggolaanaysa kuwa weerarka geysta in ay weeraraan marinnada, ay khalkhal galiyaan ama xitaa sameeyaan kormeer fog iyadoo aan la ogaanin isticmaaleyaasha.
Si kastaba ha noqotee, muuqaalka muuqaalka jirka wuxuu soo bandhigayaa caqabado la xiriira dhinacyada farsamada, maadaama kaydinta iyo tifatirka boqolaal saacadood oo fiidiyow ah ay tahay howl aad u adag.
Dhibaatooyinka farsamada waxay ahaayeen kuwa ugu weyn: waqtiga loo soo dejinayo sawirrada wuu dheeraan karaa, taas oo ku sii kordhineysa culeyskooda shaqo. Mid ka mid ah daraasadaha ayaa cadeeyay inuu sare u kacay heerka shaqo-u-qaadista ka dhex jirta saraakiisha booliiska ee sita kamaradaha oo u aaneeyay kororka culeyska shaqada.
Pixels sawirrada ayaa hooseeya (30-40 milyan). Qorraxda adag, iftiinka casaanka lama aqoonsan karo. Caddayntu maahan mid qancinaysa. Nalka LED-ka waxaa loo isticmaalaa in lagu buuxiyo iftiinka. Saamaynta sawirka habeenkii waa mid liita, waxaana jira sawirro badan oo aan shaqeyn. Sidoo kale, nidaamku waa mid cakiran, isku hallayntu waa liitaa, dayactirku waa weyn yahay, kharashku aad buu u badan yahay, nolosha adeegga ayaa gaaban, oo rakibidda iyo dejinta ayaa adag. Booliiska elektiroonigga ah ee fiidiyowga ayaa leh ifafaalaha heer kul heer sare ah ee kombiyuutarka warshadaha isgoysyada ama kumbuyuutar gacmeed.
Kaamirooyinka dijitaalka ah ee diirada saaraya si joogto ah uma qabsan karaan, kamaradaha dijitaalka ah ee SLRna si joogto ah ayay u qaban karaan. Laakiin qiimaha kamaradda dijitaalka ah ee loo yaqaan 'SLR camera' waa 5-6 times taas oo kamarad casri ah diirada loo saaray. Nolosha tooska elektaroonigga ah maahan illaa inta nalka Iftiinka loo buuxiyo ee iftiinka, oo waxay u baahan tahay in si joogto ah loo beddelo (bilaha 2-3), laakiin saameynta iftiinka ee iftiinka elektiroonigga ayaa ugu fiican.
Ugu dambeyntii, qiimaha sare, isku halaynta, xasilloonida waa in horay loo sii hagaajiyaa, sheyga ayaa helay dhibaatooyin badan oo ku saabsan habka loo adeegsado, soosaarayaasha ayaa sidoo kale hagaajinaya naqshadeynta sheyga ee baahida dhabta ah ee Jirka-cam.
Haddii loo adeegsado Kaamirada jidhka, waxaa lagama maarmaan ah sababa sharciga sharciga ah in sawirada loo isticmaalay in lagu caddeeyo anshax xumada muwaadiniinta iyo saraakiisha booliiska labadaba. Dabcan, mabaadi'da ilaalinta xogta waa in loo hoggaansamo, gaar ahaan, mabaadi'da yareynta xogta. Marka tan la eego, waa inaysan ku imaanin adeegsi aan xadidneyn ee 'Kro-cam'. Sidaas awgeed, xaaladda sharci waa in la hagaajiyaa si ay dhibbanayaashu uga warhayaan fiidiyowga ay u heli karaan xogta oo ay u adeegsadaan Bodycam kaliya kuma eka go'aanka booliiska. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa in lagu fekero in "Kamera-cam" si otomaatig ah looga beddelo duruufaha qaarkood iyo in muwaadiniinta ay dhibaatadu soo gaadhay ay dalban karaan u-beddelashada "Body-cam" haddii ay diidaan dhaqanka saraakiisha booliisku. Waqtiga xaadirka ah, "Kamera-cam" waa hanjabaad hal dhinac ah, maxaa yeelay waxaa loo isticmaalaa si gaar ah kharashaadka muwaaddiniinta, iyada oo aan loo eegin in booliisku sharci darro yahay iyo in kale.
Hoos udhaca Kaamirada Joogtada ah ee Saraakiisha Booliska ahaa kii ugu dambeeyey: December 2nd, 2019 by admin
2889 Wadarta Views 15 Views Maanta
Dib udhacyada Saraakiishii Booliis ee isticmaalaya Camera-Worn Camera